Ny lehibe indrindra ny tahan'ny raikitra-mihodinkodina rafitra
トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Ny lehibe indrindra ny tahan'ny raikitra-mihodinkodina rafitra
Moa ny lehibe indrindra ny tahan'ny raikitra-hita matetika mihodinkodina eo amin'ny fampindramam-bola toy ny karatra, fa raha tena ampiasaina, koa ho maro ny olona tsy mahalala ny fomba hamaly.
Tamin'ity indray mitoraka ity, miaraka amin'ny tombontsoa sy ny fatiantoka ny lehibe indrindra ny tahan'ny raikitra-mihodinkodina rafitra no nampidirina.
mifandray / ny tale sy ny fahalianana ny tahan'ny raikitra-mihodinkodina
mifandray / mizana-tsary fototra sy ny fahalianana-tsipika mahitsy hamaly rafitra
inona no tena tahan'ny raikitra-mihodinkodina
tena raikitra-tahan'ny mihodinkodina rafitra ary amin'ny iray efa voafaritra mialoha arakaraka ny fotoana ny fifanarahana dia niditra tao, zavatra izay hanatanterahako ny isam-bolana hamaly.
Manokana, ampitomboina ny tahan'ny raikitra ny tale, ny habetsahan'ny vola miampy tombontsoa maro ny tena izy eo amin'ny fampindramam-bola isan-annum izay ny mizana, dia hatao toy ny isam-bolana hamaly vola.
Raha ny ohatra manokana
fihenan'ny mahay mandanjalanja 4% mpanjifa bola amin'ny tena raikitra tahan'ny mihodinkodina, nindramina 100.000 Yen 10% isan-taona zanabola, kajy dia toy izao manaraka izao ho.
100.000 Yen × 4% + (100.000 Yen × (10 ÷ 12 volana)) _ x000D_ = 4.000 Yen + (100.000 Yen × 0,83%) _ x000D_ = 4, Mba hanao ny fandanjalanjana ny 830 Yen
trosa hamaly nihena ho an'ny tsirairay, dia miavaka amin'ny hidina repayments mazava ho isam-bolana isam-bolana. _X000D_ ny raharaha ny volana nanaraka,
((\_ 100.000 Yen -4830) × 4%) + (\_ 100.000 Yen -4830) × 0,83%) _ x000D_ = (95.170 Yen × 4%) + (\_ 95.170 × 0,83%) _ x000D_ = dia ho 3807 Yen Tasu790 Yen
maha samy hafa dia tsy manan-danja eo amin'ny 233 Yen, rehefa afaka enim-bolana amin'ny alalan'ny fampiasana ny fihenan'ny-mandanjalanja no azonao androsoana eo amin'ny manakaiky ny 5000 3000 Yen Yen.
tena raikitra-tahan'ny mihodinkodina mendrika dia ny hamaly fotoana isan'ny azo kajy mialoha.
ho an'ny isam-bolana mora ny hahatakatra ny fomba miverina hoe hatraiza ny lehibe indrindra dia, ny farany hamaly imbetsaka koa mety sy mora takarina.
koa ho an'ny olona mba hampiasa voalohany fikambanana ara-bola, dia milaza fa azo ampiasaina nomanina. Vola ho
hamaly koa, dia tombontsoa lehibe, satria lehibe kely noho ny fahalianana sy ny tahan'ny raikitra-mihodinkodina rafitra. Satria misy koa ny fomba mba hifantoka hamaly
tena, dia ny isan'ny fotoana tsara kokoa azo foanana eto dia be mazava ho azy. Raha
tentatively Misambotra 100 tapitrisa sy ny isan'ny fotoana in-200 eo akaiky eo, misy fotoana iray hafa tokony ho 15 taona, teraka tamin 'ny andro kajy.
ny zava-misy fa ny isan'ny hamaly kely, dia ny hoe tsy mila vola mahaliana. Raha nindramina
50 tapitrisa sy ny maha samy hafa ny tale sy ny fahalianana ny tahan'ny raikitra-mihodinkodina rafitra ho tena lehibe, ary tokony ho 150.000 Yen.
Noho ny fahasamihafana kely tamin'ny andron'i hamaly isam-bolana, dia tsy vitsy ny olona izay tsy mahita ny fahasamihafana.
toy ny fatiantoka ny fototra ny tahan'ny raikitra-mihodinkodina rafitra, ny isam-bolana hamaly vola, misy teboka izay napetraka ho avo noho ny tale sy ny fahalianana tahan'ny raikitra-mihodinkodina rafitra.
Ny anton'izany dia satria ny habetsaky ny vola izay namely ny tale, lehibe kokoa noho ny hafa hamaly fomba. Na dia
zanabola dia tsy miova, mety tsy maintsy ny maha samy hafa ny 10.000 Yen akaiky ny enta-mavesatra ny kitapom-batsy teraka.
Ny amin'izao fotoana izao, koa marina fa ny orinasa ara-bola kely fampidirana ny lehibe indrindra tahan'ny raikitra-mihodinkodina rafitra.
Noho izany, na dia tianao raha hisafidy fomba izany, ny toerana voalohany no mety ho orinasa tsy hokarakaraina.
bebe kokoa, ny milaza fa na dia hamaly mitombo, satria ny tsy mividy dia ny voninahitra no mihodinkodina, misy ihany koa ny mety ho lasa hamaly fe-potoana ara-dal?na intsony noho ny findramam-bola.
Na izany aza, raha toa ny vokatra ny vola napetraka, dia ny hery azo havaly eo aminy fotoana tany am-boalohany.
tena raikitra-tahan'ny rafitra mihodinkodina nindramina tena, maro ny efa voafaritra mialoha ny tahan'ny raikitra, no hamaly ny habetsahan'ny vola miampy tombontsoa. Araka ny
soa, dia miatrika ny manamarika fa ny isan'ny volana mba hamaly azo kajy hatrany am-piandohana.
Ary amin'ny hamaly habetsaky ny vola, fara fahakeliny, raha oharina amin'ny fomba hafa, tsy mila miahiahy momba ny fandoavana be dia be ny olona liana.
kosa, tahaka ny fatiantoka, lehibe repayments ampiharina amin'ny isam-bolana, dia homena izany.
rehefa triatra na dia misy amin'ny an-jatony arivo, indraindray dia lehibe kokoa ny vola aloa vola ho amin'izany tany izany, dia tokony hifantina avy ny hahatakatra.
Ankoatra izany, satria misy orinasa vitsivitsy izay nanao ny lehibe indrindra ny tahan'ny raikitra-mihodinkodina fomba, arakaraka ny fotoana ilaina ny vola ilainao mba hahatonga ny orinasa hisafidy tsara.
ny tale tahan'ny raikitra-mihodinkodina nindramina rafitra tena, maro ny efa voafaritra mialoha ny tahan'ny raikitra, izany no hamaly ny habetsahan'ny vola miampy tombontsoa. Araka ny